जंगली हात्तीबाट बच्ने र बालीनाली जोगाउने सजिलो उपाय » नेपाल प्लस
जंगली हात्तीबाट बच्ने र बालीनाली जोगाउने सजिलो उपाय
जंगली हात्तीको आक्रमणबाट बर्दियाको मगरागढी गाविसको माकरकट्टीफाँटाका स्थानीय गिरिराज परियार मारिए अस्ति। उनकी श्रीमती रेखालाई गम्भीर घाइते बनायो । गत महिना जंगली हात्ती उसैगरि पूर्वको झापा पसेर मान्छे मार्‍यो । दिउँसो बजारमै पसेर उद्दण्ड मच्चायो (तस्विर हेर्नुस्) । जंगली हातीको यस्तो आक्रमण पूर्व झापादेखि पश्चिम महेन्द्र नगर सम्मै खपिरहेका छन् स्थानिय जनताले । मूख्य गरि चारकोसे झाडी वरिपरिको वस्तीमा हात्तीले मान्छे मार्ने, घर भत्काउने र बालीनाली मास्ने गरिरहेको छ ।
तर स्थानिय प्रशासनले भने हात्तीको आक्रमण र क्षतीलाई रोक्ने सजिलो उपाय हुँदाहुँदै पनि झन हात्ती बिच्काउने र उत्तेजित पार्दै आएको छ जसले गर्दा झन बढि क्षती हुने गरेको हो । के छ त हाती आक्रमणबाट बच्ने सजिलो उपाय ?
तरिका एकदम सजिलो छ । महँगोपनि छैन । सामान्य काठ र तारबाट बनेको माहुरीको घारले प्रहरीका बन्दूक र राँको, जनताको चिच्याहटलाई नटेर्ने हात्ती कुलेलम ठोक्ने गरेका छन् । किसानका बालीनाली मास्न पस्ने हात्तीलाई तर्काउने गरेका छन् । त्यसको लागि अरु केहि गर्नु पर्दैन, माहुरी बस्ने काठ्का घारहरु बनाउने । हात्ती आउने बाटोमा खेती भन्दा करिब १० मिटर परै मसिना तारहरुमा बाँधेर माहुरीका घार राखिदिने । लहरै राखिएका घारहरु एकले अर्कोलाई छुनेगरि बाँध्ने । जब हात्ती बाली नाली खान वा मान्छेका घरमा पस्न खोज्दा त्यो डोरीमा हात्ती ठोक्किएर माहुरीको घार हल्लिन्छ । माहुरीले आफूलाई दख्खल दिन आएको ठानेर हात्तीलाई टोक्न जान्छन् । अनि हात्ती कुलेलम ठोक्छन् । यसलाई सजिलै, न्युन खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने र यसबाट धनजनको क्षती र हात्ती संरक्षण समेत गर्न सकिने बैज्ञानिकहरुले औंल्याएका छन्।
हात्तीको छाला त्यति बाक्लो हुन्छ कसरि टोक्न सक्छ भन्ने लाग्न सक्छ । त्यो साँचो हो कि हात्तीको शरिरमा अधिकांश भागको छाला बाक्लो हुन्छ । तर कानको छेउ, आँखा र सुँडको छाला अत्यन्त पातलो र संवेदनशिल मानिन्छ । माहुरीले त्यस्तै कमलो ठाउँमा टोक्दा त्यस्का खिल गढ्छन् । माहुरीको खिल गढेपछि हात्तीलाई दुख थाल्छ लामोसमय सम्म । बैज्ञानिकहरुका अनुसार त्यसको पीडा हात्तीलाई यतिसम्म हुन्छ कि ज्वरोनै आउने गरेको छ । यहि डरले हात्तीहरु भाग्ने गरेका हुन् । जंगलमा विचरण गर्ने हुनाले हात्तीहरु यसैपनि माहुरीको टोकाइबारे जानकार रहन्छन् ।
(झापा बिर्तामोडमा दिउँदै पसेको जंगली हात्ती)
केन्यामा जंगली हात्तीले मान्छे मार्ने र किसानका बालीनाली मास्ने गर्न थालेपछि किसानले बिद्धुतिय धराप राखेर हात्ती मार्ने, विष राखिदिने वा गोली हानेर हात्ती मार्न थालेका थिए। यसलाई कसरि रोक्ने भनेर बेलायतको लण्डन विश्व विध्यालयका अनुसन्धानकर्मीहरुले अध्ययन गरे। त्यस क्रममा लण्डन यूनिभर्सिटीको ज्योलोजी बिभागका फ्रिज भोलराथले माहुरी भएका रुखहरुबाट हात्ती तर्किने गरेको पत्तो पाए सन् २००२ मा । केन्यामा त्यसरि लहरै राखिएका माहुरीका घार मध्ये केहिमा माहुरी थिएनन् चाका मात्रै राखिएको थियो । माहुरीको चाकाको गन्धपनि हात्तीले थाहा पाउने भएकोले त्यस्तो बाटोबाट हात्ती तर्केको पत्ता लाग्यो । हात्तीहरु महुरीको भुनुनु सुन्नासाथै पनि पुच्छर ठाडो पार्दै भागेको उनीहरुले पत्ता लगाए ।
हात्तीहरुको स्मरण शक्ति ज्यादै तगडा हुन्छ । माहुरीले एक पटक टोकेपछि तिनले आफ्नो जिवनभर भुल्ने गर्दैनन् । हातीहरु समूहमा बस्ने जनावर हुन् । एक अर्काका अनुभव र खतरा तुरुन्तै आदानप्रदान गर्छन् । त्यसैले समूहको कुनै एउटा हत्तीलाई माहुरीले टोक्यो भनेपनि बाँकि सबै हात्ती भाग्ने गर्छन् । त्यसो त माहुरीको आक्रमण बाट हात्ती मात्रै नभएर अरु जनावरपनि डराउने गर्छन् । त्यति मात्रै हो र ? माहुरीको आवाजलाई रेकर्ड गराएर उनीहरुले हात्ती नजिक आएको बेला ठूलो स्वरले स्पिकर मार्फत बजाउँदापनि हात्ती तर्सेर भागेको पाइयो । त्यसरि माहुरी राख्नाले अन्य फाइदापनि भए । माहुरीको मह बेचेर आर्थिक मुनाफा हुने भयो भने हात्ती संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि । त्यसैगरि हात्ती रोक्न भन्दै बनाइने महँगा पर्खालमा जाने रकमपनि जोगियो ।
उनीहरुले अफ्रिकन बीज भनिने माहुरीका घार राखेका हुन् । माहुरीका बिभिन्न जात हुनाले कुन माहुरी बढि आक्रमक हुन्छ भनेर छुट्ट्याउने काम विशेषज्ञहरुको हो । त्यसो त नेपालमा पाइने माहुरी उपयुक्त नभएमा केन्या वा बेलायतबाटैपनि यो माहुरीको जात ल्याउन सकिन्छ । किनभने केन्या र नेपालको तराइ क्षेत्रको हावापानी मिल्छ । तर यस्तो कुरोमा कसले ध्यान दिने ? सिंह दरबारभित्रै हराएको दिशाबिहिन सरकारले कि सधैं सरकारको मुख ताक्ने स्थानिय जनता ? वा वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा डलरका खेती मात्रै गर्ने गैह्र सरकारी संस्थाले ?
(पहिलो फोटो अफ्रिकन साइन्स जर्नल र दोस्रो क्रिष्ण अविरलको फेसबुकबाट लिईएको हो)
प्रकाशित मिति: January 22, 2012
अमेरिकी अनुसन्धानको दाबी : रहस्यमय जिव 'यति' होइन 'योगी'
यस्तो हुन्छ जिवजन्तुको भ्यालेन्टाईन (फोटो कथा)
सुकेको रुख ओगट्न घमासान
डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा शिकार गर्दै अफ्रिका, ट्रम्पले ल्याए हाती सिध्याउने योजना
लेख एकदम नै उपयोगी लाग्यो .
हाम्रो देशमा पनि जंगलको छेउ छाउको गाउँमा हाती बाघ आदिले
दुख दिन्छ सर्बसाधारणलाई .
यस किसिमका उपाय अपनाउन सरकारको मात्रै भर परिरहनु
आबश्यक छैन .
थोरै खर्च ( साच्चै भन्ने हो भने जंगल छेउ घर हुनेहरुले मुढा – डोरी आदिमा खर्च गर्नु पनि पर्दैन , यस मानेमा त खर्च भएता पनि एकदम न्यून हुन्छ ) मा नै हुन्छ , खर्च भनेको मेहेनत हो , उनीहरुले गर्नु पर्ने .
अब यस्तो काईदा सिकाउने जिम्मा भने सरकार देखि लिएर
सम्बन्धित निकाय सबैले लिनु पर्छ . उपाय सिकाई दिए जनता आफै अग्रसर भएर गर्ने छन् .
यस किसिमका लेख अनुसन्धानलाई बिभिन्न पत्रिकाले पनि स्रोत
खुलाएर छापिदिए जनता र देशको हितमा हुने थियो .
राम्रो जानकारी, मैले एकपटक डिस्कवरी हेर्दा हात्ति को आक्रमण बाट बच्न बाघ र सिँह को टोन को प्रयोग गरेको थिए, सिनेमा हल को बाहिर बज्ने माइक लाइ क्यासेट मा जोडेर त्यसमा बाघ या सिँह को टोन बजाएमा पनि हात्ति भाग्छ
very good idea yes we can use this item if this succesfull so we could save money and time.
very good and useful article. Thanks.
अरे अचम्मको प्रबिधि रहेछ यो त्/घर कोठामा सांग्ला कमिला आदिले दुख दिएमा भगाउने सानो ईलेक्त्रोनिक्स देभाईस १०, १५ दलारमै किन्न पाउँछ/मैले पनि प्रयोग गर्दै छु/ काम गरेको छ/ पहिला अलि सांग्लाहरु कमिला अलि देखिन्थ्यो अहिले छैन/
तेस्तो देभाईसले यक किसिमको आवाज निकलिरहंछ जुन किराहरुको लागि सहय हुँदैन/ अब त् भुक्दै गर्ने कुकुरलाई चुप गराउने तेस्तै देभाईस पनि किन्न पाईन्छ/ मैले विज्ञापनमा देखेको थिएँ/
अब माहुरीको आवाज निकाली रहने कुनै तेस्तो ईलेक्त्रोनिक्स देभाईस बनाउनु कुनै गाह्रो काम त् हो जस्तो मलाई लाग्दैन/माथि भनि नै सक्यो कि माहुरीको आवाज स्पिकर बात बजे पनि हाती भाग्छ भनेर/ कुनै मित्र ईलेक्त्रोनिक्समा ईन्जिनियर भए उहाँले प्रयत्न गरे बन्छ कि/ उहाको सानो प्रयत्नले नेपालीको ज्यान बच्छ/
सानो छँदा श्यालको जस्तै आवाज निकाल्यो भने गैंडा भाग्छ र न्याउरिको छाला घरमा राखे तेस्को गन्धले पनि मुसा सात चोक पर देखि भाग्छ भनि सुनेको थिएँ/
ददी जी र अन्य मित्रहरु, अन्य देशबाट ल्याउनु नै पर्दैन, नेपालमा पाइने मौरीहरुका प्रजातिहरु मध्य नेपालको मध्य पहाडी र तराई भेगमा पाइने एपिस सेरेना जातिको स्थानीय मौरीले (Apis cerana)नै त्यो काम गर्न सक्छ.